Xubno ka tirsan guddiyada doorashada oo gaaray Garbahaarey | dayniiile.com
Home WARKII Xubno ka tirsan guddiyada doorashada oo gaaray Garbahaarey
Xubno ka tirsan guddiyada doorashada oo gaaray Garbahaarey
Waxaa maanta magaalada Garbahaarey ee gobolka Gedo gaaray wafdi ka socda guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo xalinta khilaafaadka, kuwaas oo warbaahinta u faahfaahiyey qorshaha socdaalkooda.
Cabdiweli Maxamed Cilmi oo ka mid ah xubnaha guddiga FEIT ee maanta gaaray Garbahaarey ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan go’aanka ah in deegaan doorashada labaad ee Jubbaland loo wareejiyo magaalada Ceelwaaq.
Wuxuu sheegay in go’aankaas aysan ku mideysneyn xubnaha guddiga, “Sidaas darteed waxaan leenahay habraaca doorashada waxbaa laga bedeli karaan, laakiin sharciyadeeda wax lagama bedeli karo, anigu sharciyad ayaan ku soconaa, waxaana diyaar u nahay inay doorashada ku qabno magaalooyinka sharciga ah ee lagu heshiiyey oo Garbahaarey ay ku jirto,” ayuu yiri Cabdiweli.
Xubnahaan oo badankood warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay Garbahaarey u tageen qabashada doorashada 16-ka kursi ee laga soo doorto gobolka Gedo, iyagoo kormeer ku tegay goob loo qorsheeyey inay doorashada Garbahaarey ku qabtaan.
Dhanka kale xubno uu hoggaaminayo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geelle ayaa ku sugan magaalada Kismaayo oo shalay ay ku qabteen doorashada hal kursi, kuwaas oo maalmaha soo socda ku jawahan degmada Ceelwaaq, si doorashada 16-kaas kursi ay u qabtaan.
Sida muuqata gobolka Gedo waxaa laga abaabulayaa doorashooyin is barbar socda, waxaana xusid mudan in xukuumadda iyo dowlad goboleedka Jubbaland ay isku raaceen in doorashada kuraastii taallay Garbahaarey loo wareejiyo Ceelwaaq oo Jubbaaland ay maamusho.
Tallaabadaas waxaa ka carooday maamulka iyo siyaasiyiinta kale ee gobolka Gedo, waxayna hadda isku diyaarinayaa doorasho u gaar ah, iyagoo garab ka helaya xafiiska Farmaajo oo loolan adag oo kuraastaas ku wajahan uu kala dhaxeeyo Axmed Madoobe.
Previous articleSarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab oo lagu qabtay Sh/Hoose
Next articleGabadh caan ka aheyd TikTok oo lagu xukumay saddex sano oo xarig ah
Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamer oo dalab u diray Farmaajo
Wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya oo shaacisay in berri la...
Mohamed Abdullahi Mohamed - May 16, 2022 0